China Welding machine, DC welding machine, AC welding machine, welding mask, welding accessories factory ary mpanamboatra | Boda
Ny tanjon'ny milina famafazana herinaratra dia ny fampifangaroana ny solder sy ny fitaovana hodiovina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny tsipika hafanana avo lenta vokarin'ny lalan-kely eo ho eo eo anelanelan'ny tendrontany tsara sy ratsy, mba hampifangaroana ireo zavatra nifandray.
Tsotra ny firafiny, mpanova hery lehibe izy io. Ny milina welding dia azo zaraina amin'ny karazany roa arakaraka ny karazana herin'ny output, ny iray dia ny famatsiana herinaratra AC, ny iray kosa ny famatsiana herinaratra DC. Mampiasa ny fitsipiky ny inductance izy ireo, ny inductance dia hamokatra fiovan'ny herinaratra goavambe rehefa mifamadika sy mamono, ary mampiasa ny arc misy herinaratra avo lenta vokarin'ny boriborintany fohy eo anelanelan'ny tendrontany tsara sy ratsy mba handrendrika ny solder amin'ny electrode, hahafahan'izy ireo hahatratra ny tanjon'ny fatorana ataoma.
Masinina mandeha amin'ny herinaratra no be mpampiasa. Ny milina welding dia fitaovana tena ilaina amin'ny orinasam-panamboarana sambo lehibe, orinasa indostrialy sy harena ankibon'ny tany ary orinasam-pananganana isan-karazany. Ny milina fantsom-by dia ampiasaina amin'ny fantsom-batana ary ampiasaina amin'ny herinaratra izy io.
Manokana, ny sasany amin'ireo trano fananganana kely dia mividy milina fantson-herinaratra mora vidy mba hitehirizana ny vola. Mora ny miteraka fikorontanan'ny herinaratra, ny afo ary ny fandravana rehefa ampiasaina amin'ny tontolo masiaka amin'ny toerana fananganana, izay hanimba ny filaminan'ny tena manokana sy ny fiarovana ny fananana. Noho ny kalitaon'ny fikajiana ratsy dia azo atao ny mampirodana ny tetik'asa fananganana.
Ny tombony amin'ny milina famafazana DC: ny zava-dehibe indrindra dia ny fiorenan'ny arc mandritra ny welding DC, satria tsy teboka aotra ny ankehitriny, dia afaka mitazona ny fandoroana ariva amin'ny alàlan'ny rano kely dia kely izy io, ary amin'ny ankapobeny dia afaka mampihatra karazan-tsoroka rehetra; lehibe ny fidirana welding, ary miaraka amin'izay dia mahavonjy angovo ihany izy io. Ny fatiantoka ny milina fantsom-pamatrarana DC: mora mitanila ny DC, tsy mety ho lehibe loatra ny ony ankehitriny.
Ny tombony amin'ny famafana AC dia: voalohany, tsy mora ny fitongilanana arc; faharoa, ny boriborintany ankapobeny an'ny milina fantsom-bozaka AC dia tsotra ary ny tahan'ny tsy fahombiazana dia ambany ihany; Ny fatiantoka amin'ny milina fantsom-panafody AC dia toy izao: amin'ny ankapobeny, lehibe sy be izy io; Mandritra izany fotoana izany dia lehibe ny fanjifana angovo azo ampiasaina amin'ny transformer ary matotra ny fanjifana herinaratra, ary misy fiantraikany amin'ny fifandanjan'ny herinaratra ny fidiran'ny dingana tokana.
BOSENDA dia manome andiana milina fanamafisam-peo avy amin'ny fantsom-panafody DC sy fantsom-panafody AC. Ny milina fantsom-panafody koa azo namboarina, afaka manao OEM sy ODM isika. Raha mila fanazavana misimisy kokoa, aza misalasala manontany anay.
Previous: Tape elektrika, kasety mpanohana ny fandoroana, kasety PVC, kasety misisika
Manaraka: PVC lamba Prrof orana, lamba porofon'ny orana PE, fonony kamio
Masinina manamboatra ac